जनतामा परिवर्तनको अनुभूति खोई ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / जनतामा परिवर्तनको अनुभूति खोई ?
जनतामा परिवर्तनको अनुभूति खोई ?
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय February 7, 2014	0 412 Views
नेपालमा हरेक क्षेत्र राजनीतिकेन्द्रित छ । राजनीतिक दलहरु हरक्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्छन् । कसैले शब्दमा भन्छ त कसैले व्यवहारबाट देखाउ“छ तर सारमा सबै राजनीतिक दलहरु हरेक क्षेत्रमा कब्जा जमाउन चाहन्छन् । त्यसैले त हामी देखिरहेछौं, विद्यालय, वन, खानेपानीलगायत सामाजिक र पेशागत संघसंस्था जताततै दलगत प्रभाव बढ्दो छ । कुनै पनि निकायमा नेतृत्व चयन गर्नुप¥यो कि दलीय प्यानल खडा हुन्छन् र तामझामका साथ चुनावी प्रचारप्रचार शुरु हुन्छ । दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा यो स्वाभाविक पनि होला तर यो राजनीतिक उछिनपाछिन र दाउपेचको अन्तिम उद्देश्य के ? यसको वास्तविक जवाफ जनताले पाउन सकिरहेका छैनन् । आफ्नै श्रम पसिनामा होस् वा अन्य कुनै विधि प्रक्रियाबाट सीमित व्यक्तिहरुले मनग्य धनपैसा कमाएका छन् र तिनीहरुको जीवनस्तर पनि फेरिएको छ । तिनै जीवनस्तर फेरिएकाहरुको देखासिकीमा बा“की जन पनि ऋण काढेरै सही, वैधानिक अवैधानिक समातेरै सही, पछिपछि दौडने प्रयत्न गरिरहेका छन् तर राज्य वा राजनीतिक दल (जो राज्य सञ्चालनको नीति नियम बनाउ“छन्) हरुको पहलद्वारा जनताले अनुभूत गर्ने गरी योजना बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले फेरि पनि जन–जनले प्रश्न गरिरहेका छन्– यति धेरै दाउपेच र खिचातानीबाट अघि बढिरहेको राजनीतिले जनतालाई के दिन सक्यो ? पीडैपीडा र दुःखकष्टमा बा“चिरहेका जनताको पीडा बोक्ने कसले ?
चार दिनअघि मात्र एउटा खबर आयो– तीन दिन पैदल हिडेर आउ“दा पनि गाविसमा सचिव भेटिदैनन् । यो कुनै हिमाली वा पहाडी जिल्ला होइन सापेक्षिकरुपमा सुगम मानिने दाङ जिल्लाकै पीडा हो । तीन दिन पैदल हि“डेर सेवाग्राही नागरिकताको सिफारिस लिन गाविसमा आउ“छन् तर सचिव भेट्दैनन् । सचिव खोज्दै बजारमा भौतारिन्छन् र सिफारिस लिनैका लागि आउने, जाने, खाने बस्ने आदिमा ५÷७ हजार खर्च गर्नुपर्छ । एउटा बालक जन्मेपछि उसको जन्मदर्ता गर्ने, उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउने आदि जन्मसिद्ध अधिकार हुन् । यो अधिकारको प्रत्याभूति गराउने राज्यको आधारभूत दायित्व हो तर नागरिकता बनाउन वा जन्मदर्ता गर्न पैदल तीन चार दिन हि“ड्नुपर्ने र ५÷७ हजार खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले हाम्रो मुलुकको विकासक्रम कहा“ छ स्वतः स्पष्ट हुन्छ । घटना प्रसंग दाङको राजपुर गाविसको भए पनि यो समग्र नेपालको प्रतिनिधिमूलक चित्रण हो । हामीले अहिलेसम्म गरेका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि जनतासम्म कति पुग्न सकेका रहेछन् भन्ने पनि यो गजबको उदाहरण हो ।
परिवर्तनको एउटा सानो अंशसम्म पनि जनतामा पुग्न सकेको छैन भने अहिलेसम्म जनताकै लागि भनेर राजनीति गर्नेहरुले एकपटक छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? सीमित नेता कार्यकर्ताले कमाउ धन्दा चलाउने, पार्टीभित्र व्यक्तिकेन्द्रित चलखेल र गुटबन्दी तीब्र बनाउने र हरेक निकायमा दलीय वा गुटगत हस्तक्षेप बढाउ“दै जनताको स्वस्फूर्त र स्वनिर्णयको अधिकारलाई कमजोर बनाउ“दै लैजाने कुरामा अहिलेको राजनीति बढी केन्द्रित भएको छ । यहा“ कुनै दल वा नेताको कुरा होइन नेपाली राजनीतिको समग्र प्रवृत्ति नै यसरी अघि बढिरहेको छ । अवसर जति टाठाबाठाले लिने अनि पीडा जति गरीव र पिछडिएको समुदायले व्यहोरिरहने स्थितिको निरन्तरता नेपाली जनताको अपेक्षा होइन । अहिले हे¥यौं भने भएको छ त्यस्तै । राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने अवसरमा पहु“चवालाहरुले नै ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् भने गाउ“मा बस्ने सोझासिधा जनताको अभावग्रस्त दैनिकीमा कुनै कमी आएको छैन ।
तात्कालीक घटनालाई मात्र हे¥यौं भने पनि रुकुमका ग्रामीण क्षेत्रमा यथोचित उपचारको अभावमा झाडापखाला नियन्त्रणबाहिर जा“दैछ तर राजधानीमा बस्ने, उच्च ओहोदा ओगटेकाहरुले राज्यकोषबाट उपचारका लागि लाखौंको रकम प्राप्त गरिरहेका छन् । यो देशको स्रोतसाधनलाई सीमित पहु“चवालाको कब्जाबाट मुक्त गर्न र अवसरलाई समानरुपमा वितरण गर्नुपर्ने मुख्य ध्येयका साथ नै अहिलेसम्मका तमाम् राजनीतिक आन्दोलन भएका हुन् । निश्चित वर्ग र निश्चित क्षेत्रका व्यक्तिले मात्र प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधा आम जनतामाझ समानरुपमा वितरण गर्न नै नेपाली राजनीतिमा राज्यपुनर्संरचनाको एजेण्डाले प्रवेश पाएको हो । देशलाई संघीयतामा लैजाने भनेको पनि त्यसैका लागि हो । एउटा निश्चित क्षेत्रमा रहेको सेवासुविधा देशभरि समानरुपमा वितरण गर्न संघीयता चाहिएको हो । संघीयतामा प्रदेश निर्धारण, नामांकन, सीमांकनजस्ता प्राविधिक विषयमा बहस र विवाद जारी रहे पनि अन्तरिम संविधानअनुसार नै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेको छ । तर, व्यवहारमा जनताले अझ बढी सास्ती र पीडा व्यहोर्नुपरिरहेको छ । एउटा नागरिकताको सिफारिस बनाउन वा जन्मदर्ता गराउन तीन दिन पैदल हि“ड्नुपर्ने र ५÷७ हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता किमार्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाअनुकूल हु“दैन । तसर्थ, हरेक ठाउ“मा कब्जा वा वर्चस्व जमाउने ध्याउन्नमा लागेका दलहरु अब जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनेतिर पनि लाग्ने हो कि !
Previous: हामी संस्कृतिको संरक्षणतिर कि विकृतिको प्रवद्र्धनतिर ?
Next: सुकौरामा सांस्कृतिक महोत्सव हुने
ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहारविरुद्धको आवाज
बजेट कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण
कानुन निर्माणमा समन्वयको खाँचो